‘लामो समयको अनुभव नै नोभाको सफलता हो’ – Arthik Awaj
‘लामो समयको अनुभव नै नोभाको सफलता हो’
By आर्थिक आवाज	 २०७६ जेष्ठ २ गते बिहीबार १२:२५ मा प्रकाशित
नोभा कम्प्युटर एण्ड ल्याङग्वेज इन्स्टिच्युट, महेन्द्रपुल पोखरा
पोखराको महेन्द्रपुलमा १५वर्ष अगाडिबाट सञ्चालित नोभा कम्प्युटर एण्ड ल्याङग्वेज इन्स्टिच्युटले कम्प्युटर कक्षासँगै जापानीज भाषा कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्यार्थीलाई परामर्श सेवा समेत प्रदान गरिरहेको नोभाका प्रवन्ध निर्देशक सवी शेरचनसँग जापानको लामो समयको अनुभव समेत छ । यसै प्रसंगमा नोभाका विशेषता तथा नोभाका सेवाहरुमा केन्द्रित रहेर प्रवन्ध निर्देशक शेरचनसँग आर्थिक आवाजका लागि रविना ढकालले गरेको कुराकानीः
नोभा कम्प्युटर एण्ड ल्याङग्वेज इन्स्टिच्युट कस्तो संस्था हो ?
स्थापना कालमा जापानीज भाषा र कम्प्युटर इन्स्टिच्युटबाट नोभा कम्प्युटर एण्ड ल्याङग्वेज इन्टिच्युट शुरु भएको हो । अहिले जापानीज, कोरियन, अङ्ग्रेजी भाषाको कक्षासँगै कम्प्युटर कक्षा संचालनको भइरहेका छन् । नोभा २०६१ सालमा स्थापना भएको हो । सुमेश शेरचनले यसको स्थापना गर्नुभएको हो । धेरै चुनौतीको सामना गर्दै नोभा अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । बिगतबाट हामीले धेरै पाठ सिकेका छौं । त्यती बेलाको समयमा महेन्द्रपुलमा कुनै इन्स्टिच्युट थिएनन् । अहिले नोभा धेरै राम्रो छ । विद्यार्थीको रोजाईमा पर्न सफल छ । पोखरा मात्र नभई काठमाडौंबाट पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । काठमाडौंको पुतलीसडकमा पनि नोभाको कार्यालय छ । विद्यार्थीको विश्वास जित्न सफल हुनु नै नोभाको सफलता हो ।
नोभा संचालन गर्ने सोच कसरी आयो ?
म आफै १० वर्ष जापानमा बसेर आएको हुँ । म सगँ अनुभव पनि छ । जापानमा नोभा इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट मैले देखेको थिए । यसबाट म प्रभावित भए । त्यसपछि, नेपालमा इन्स्टिच्यूट सञ्चालन गरेर जापानमा नेपाली विद्यार्थी पठाउन सकियो भने नयाँ ज्ञान, सिप, प्रविधि सिकेर आएर नेपालमा नै केही गर्न सक्ने अवस्था छ भन्ने लाग्यो । जापानबाट सिकेर आउनुपर्ने कुरा धेरै छन् । हामीले नोभाबाट विद्यार्थी पठाउन पनि शुरु ग¥यौं । हाम्रो फोकस जापानीज भाषा हो । तर, यससँगै कोरियन भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा तथा कम्प्युटर कक्षा पनि संचालन गरेका छौं ।
हामीले धेरै विद्यार्थी जापान अध्ययनको लागि पठाएका छौं । हामीले पठाएका विद्यार्थीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । विद्यार्थीले राम्रो गरेको सुन्दा खुसी लाग्छ । विद्यार्थी सन्तुष्ट छन् । विद्यार्थी सफल र सन्तुष्ट हुनु नै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो । आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसार सफल भएका छन् । यसमा हामीले गर्व गरेका छौं । जापानबाट फर्केर आएकालाई हामीले प्रशिक्षक (सेन्से) बनाएका छौं । हामी जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका थियौं, सो उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल छौं ।कतिपय विद्यार्थी उतै सेटल पनि भएका छन् ।
म आफै जापान बसेर आएको हुनाले धेरै कुराको जानकारी छ । त्यहाँको नीति नियम कस्तो छ ? कसरी अध्ययन गर्ने ? काम कसरी गर्ने ? हामी सिकाउँछौं । मैले आफूले देखेर तथा भोगेर आएका कुरा तथा अनुभव विद्यार्थीलाई बाँड्ने गरेको छु । जापान गएर अध्ययन गरेर नेपालमा फर्केर आफूले जानेका तथा सिकेका कुरा अरुलाई पनि सिकाउने तथा आफ्नो क्षमता तथा दक्षता प्रदर्शन गर्न सकेमा अझै राम्रो हुन्छ ।
कति लगानीबाट नोभा शुरु गर्नुभयो ?
शुरुवातको समयमा करिव १२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थियौं । समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्दै ल्याएका छौं र लगानी पनि बढिरहेको छ । आवश्यकता अनुसार कक्षाकोठा व्यवस्थापन गरेका छौं । कम्प्युटरको लागि छुट्टै ल्याब छ । विभिन्न भाषाका लागि फरक फरक कक्षाकोठा छन् । स्क्रिनिङ मार्फत सिकाउँछौं । विद्यार्थीको चाहना तथा रुची र स्तर अनुसारको विषय छनोट गर्न हामी सघाउँछौं ।
सामाजिक क्षेत्रमा कसरी काम गर्नुभएको छ ?
नोभा कम्प्युटर एण्ड ल्याङग्वेज इन्स्टिच्युटले विभिन्न सामाजिक काम पनि गर्दै आएको छ । विभिन्न विद्यालयमा कम्प्युटर प्रदान गरेको छ । आमा समूहलाई कम्प्युटर तालिम दिएका छौं । दृष्टिविहिनलाई लक्षित गरेर समय समयमा कम्प्युटर कक्षा पनि संचालन गर्दै आएका छौं । अहिलेको सूचना तथा प्रविधिको युगमा सबैलाई सहज हुनुपर्छ भने समय समयमा गृहिणीलाई पनि कम्प्युटर तालिम प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । हामी कम्प्युटर एशोसिएन र ल्याङ्ग्वेज एशोसिएसनमा पनि आवद्ध छौं । यसबाट पनि हामीले धेरै कुरा बुझ्ने मौका पाएका छौं । इन्स्टिच्युट संचालनमा पनि सहज भएको छ ।
नोभा कम्प्युटर एण्ड ल्याङग्वेज इन्स्टिच्युटमा के कस्ता कोर्ष संचालन भएका छन् ?
जापानीज भाषाका कोर्षमा तयारी कक्षा, न्याट टेष्ट, टप जे, जेएलपिटी, पि.जे. सीका कोर्ष रहेका छन् । कोरियन भाषाको इपिएस टपिकको कक्षा छ । कम्प्युटर एप्लिकेसनको प्रोफेसनल कोर्ष, डिप्लोमा कोर्ष, ग्राफिक्स डिजाइनिङ, वेव डिजाइनिङ, एकाउन्टिङ प्याकेज, कम्प्युटर हार्डवयर कोर्ष लगायतका कोर्ष संचालन भएका छन् । अङ्ग्रेजी अन्तर्गत प्रिवेसिक तथा वेसिक इङ्लिस कोर्ष, इन्टरमिडिएट इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज, एडभान्स इङ्लिस कोर्ष छन् ।